ဘောင်းဘီရှည် – အဆိုပါ Tailoress
ဧပြီလ 22, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, အဝတ်အစား, ဘောင်းဘီရှည်, tutorials, အမြိုးသမီးမြား
Caitlyn Leggings သင်ခန်းစာ
မေ 16, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | Leggings, ဘောင်းဘီရှည်, tutorials, အမြိုးသမီးမြား
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. Lay Front on Back Right Sides together. pin နှင့် zig-zag ချုပ်သုံးပြီးအတူတကွခြမ်းချုပ်ရိုးချုပ်. တစ်ဦး overlocker သို့မဟုတ် zig-zag ချုပ်သုံးပြီးချုပ်ရိုးပြီးစီး. သည်အခြားခြေထောက်များအတွက် Repeat. လှမ်း2ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးမှားခြမ်းအထဲက Turn. Insert one leg into the other and match the […]
မေ 11, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | Leggings, ဘောင်းဘီရှည်, tutorials, အမြိုးသမီးမြား
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. Cut one length of elastic for the waistband as follows: SIZE LENGTH457စင်တီမီတာ659စင်တီမီတာ 8 61စင်တီမီတာ 10 65စင်တီမီတာ 12 69စင်တီမီတာ 14 73စင်တီမီတာ 16 77စင်တီမီတာ 18 81cm Fold Leggings in half Right Sides together, pin and sew with zig-zag stitch along the inside leg seam. Finish […]